'I-Alien 5' Tease iya kubuyisa iRipley yeWigver Weaver- iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	'I-Alien 5' Tease iya kubuyisa iRipley ye-Sigourney Weaver
'I-Alien 5' Tease iya kubuyisa iRipley ye-Sigourney Weaver
by UTrey Hilburn III Juni 18, 2020
by UTrey Hilburn III Juni 18, 2020 1,479 imbono
Isenokungabi “ngumdlalo ongaphezulu” kwi OMnye ilungelo lokushishina okwangoku. USigourney Weaver utyhile ukuba bobabini uWalter Hill noDavid Giler babhale iphepha elingama-50 elalifundwa nguWeaver ngoku.
Bobabini i-Hill kunye neGiler bangamahlakani ixesha elide kwi OMnye I-franchise kwaye benze isahluko esitsha esiza kuqikelelwa kuSigourney Weaver ebuyela kumlinganiswa ka-Lt. Ellen Ripley. Ke, qala ukuthandaza koothixo ukuba u-Weaver athande into ayibonayo ngokwaneleyo ukuba abuyele kwindima.
“U-Sigourney, njengoko ebenakho kwasekuqaleni, uthobekile kakhulu malunga nobuchule bakhe obuqinisekisiweyo bokutsala uluvo oluza kubalisa ibali eliyoyikisa iblukhwe kumhla wakho, ukhaba iesile leXenomorph entsha, kwaye ucamngce kwindalo iphela ye OMnye ilungelo lokuthengisa amalungelo kunye nesiphelo somlinganiswa ka-Lt. Ellen Ripley ”Hill uxelele uSyfy Wire.
Imveliso yeBrandywine yabelane ngomfanekiso wonyango ngokunjalo. Isikhuselo sityhila umxholo omtsha wethegi othi "Emajukujukwini Akukho mntu unokukuva uphupha". Ngumdlalo ocacileyo kwaye owenziwe kakuhle kwithegi yentsusa yefilimu, "Emajukujukwini Akukho mntu unokukuva ukuKhwaza".
Ithegi entsha edityaniswe nezicatshulwa ezimbini ezivela kuEdgar Allan Poe kunye noGeneral William Tecumseh Sherman zizikhombisi ezicacileyo kwinto enokuba igcinwe.
Jikelele uSherman owaziwa kakhulu ngemfazwe yakhe iphela emzantsi ngexesha leMfazwe yamakhaya. Iindlela zakhe yayikukutshabalalisa nokutshisa yonke into ebonakalayo kumhlaba wotshaba. Ngaba ayinakuba sisikhokelo sokuba uRipley enze into efanayo kwikhaya likaXenomorph? Ukuba kunjalo, ndikhona ngokupheleleyo.
Mhlawumbi ukukhankanywa kwamaphupha kwisicatshulwa sePoe kukhomba kwiindawo ezithile zefranchise engamaphupha. Ukufa kwakhe I-Alien 3 kunye nendlela yoopopayi Uvuko lwaManye amazwe. Kwirekhodi, ndiyazonwabela zonke iifilimu.
Nicinga ntoni nina? Ndiyathemba ukuba u-Weaver uyabandakanyeka kule projekthi? Sazise kumagqabantshintshi.
Umthombo: (SYFI WIRE)